အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ CloudWalk သည် Star Market သို့ ဆင်းသက် သည် - Pandaily
အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ CloudWalk သည် Star Market သို့ ဆင်းသက် သည်
May 27, 2022, 19:29ညနေ 2022/05/29 21:41:25 Pandaily
အတု ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ငန်း CloudWalkသောကြာနေ့က Shanghai Technology Innovation Board (Star Market) တွင် တရားဝင် စာရင်းဝင် ခဲ့သည်။ အရောင်းအ ၀ ယ် ၏ပထမ နေ့တွင် ၎င်း ၏ရှယ်ယာ စျေး နှုန်းသည် ၅၆% မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ၂၄ ယွမ် (ဒေါ်လာ ၃. ၅၈) သို့ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၁. ၄ ယွမ် နှင့်လက်ရှိ စျေးကွက် တန်ဖိုး ၁၅. ၈၅ ဘီလီယံ ဖြင့် အခြေချ ခဲ့သည်။
CloudWalk ကို တရုတ် သိပ္ပံ အကယ်ဒမီ ၏ ဓာတ်ခွဲခန်း တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူ Zhou Xi သည်တရုတ် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် နှင့် Urbana-Champaign ရှိ Illinois တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Zhou သည်တရုတ် သိပ္ပံ အကယ်ဒမီ တွင် AI အဖွဲ့ တည်ထောင်ရန် ပြန်လာ ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် CloudWalk ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
CloudWalk သည် စတင်တည်ထောင် ချိန်မှ စ၍ ရန်ပုံငွေ ၁၁ ကြိမ် ရရှိခဲ့ပြီး Shunwei Capital ၊ Orisa Holdings နှင့် Pricewaterhouse Capital တို့က ထောက်ပံ့ ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် B + ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၁ ဘီလီယံကျော် ပြီးစီး ပြီးနောက် Yunyou ၏တန်ဖိုး သည်ယွမ် ၂၃ ဘီလီယံ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း CloudWalk ၏ ၀ င်ငွေ သည်ပိုမို ထင်ရှား လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ကုမ္ပဏီ ၏လည်ပတ်မှု ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၈ ၀၇ သန်း၊ ယွမ် ၇ ၅၅ သန်းနှင့် ယွမ် ၁. ၀ ၇၆ ဘီလီယံ အသီးသီးရှိသည်။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီက အ ႐ံႈး ေပၚ ေနဆဲျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ ခန္႔က အ ႐ံႈး ေပၚ ခဲ့သည္။ အချက်အလက်များအရ ၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁ အထိ ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၆ ၉၂ သန်း၊ ယွမ် ၈ ၄၄ သန်းနှင့် ယွမ် ၆ ၆၄ သန်း အသီးသီးရှိသည်။ CloudWalk သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် အမြတ်အစွန်း ရရှိ ရန်မျှော်လင့် ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အလားအလာ အရ CloudWalk ၏အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို လူသား နှင့် စက် ပူးပေါင်း လည်ပတ်မှု စနစ်နှင့် အတု ထောက်လှမ်းရေး ဖြေရှင်း မှု နှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ လူ-စက် ပူးပေါင်း လည်ပတ်မှု စနစ်တွင် ကွန်ပျူတာ စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် အချိန်ဇယားဆွဲ အင် ဂျ င်၊ algorithm ဂိုဒေါင် နှင့် အထောက်အကူပြု ဒေတာ ပလက်ဖောင်း တို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ရှုပ်ထွေးသော ဆုံးဖြတ်ချက် များအတွက် ဖောက်သည် ဗဟုသုတ စင်တာ လည်း ပါဝင်သည်။
လက်ရှိတွင် အတု ထောက်လှမ်းရေး ဖြေရှင်း ချက်များသည် CloudWalk စီးပွားရေး ၏ ၉၀% ရှိသည်။ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၂၁ အထိ လူ-စက် ပူးပေါင်း လည်ပတ်မှု စနစ်၏ နှစ်စဉ် ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၁ ၈၃ သန်း၊ ယွမ် ၂ ၃၇ သန်းနှင့် ယွမ် ၁၃၆ သန်း အသီးသီး သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း ဝ င်ငွေ၏ အနည်းငယ် မျှ သာရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ CloudWalk သည် ရှန်ဟိုင်း IPO ခွင့်ပြုချက် ရရှိ ခဲ့သည်
လက်ရှိတွင် CloudWalk ၏ AI ဖြေရှင်း ချက်သည် ကုမ္ပဏီ အား ဘဏ္ finance ာရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ခရီးသွား ကဏ္ in များတွင် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင် စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် CloudWalk သည် အသိဉာဏ်ရှိသော ထုတ်လုပ်မှု၊ စမတ် စွမ်းအင်၊ meta-cosmic နှင့်စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဆော့ဖ်ဝဲ များအတွက် ဖြေရှင်းနည်း များ ကိုစတင် ပုံဖော် ခဲ့သည်။
Machine Vision ကုမ္ပဏီ LUSTER ကို Shanghai Star Market တွင် စာရင်း ပြု မည်
Gloss Technology Co., Ltd. သည် အမြင်အာရုံ စနစ် များ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော အမြင်အာရုံ ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့်အဓိက အမြင်အာရုံ ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို ကျွမ်းကျင်သော ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး IPO တစ်ခု စတ င်ရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။